I-Starcourt Mall evela kwiXesha le-'Zinto ezingabalulekanga 'iyathengiswa eGeorgia - Indlela Yokuphila
I-Starcourt Mall evela kwiXesha le-'Zinto ezingabalulekanga 'iyathengiswa eGeorgia
Izinto ezingaqhelekanga Instagram
Kuba Izinto ezingaqhelekanga abalandeli, ezi ndaba zinokuza njengomothuko. Indawo ebonakalayo yokufota kuthotho lweNetflix luya kwintengiso.
IGwinnett Place Mall eDuluth, eGeorgia, neyayisetyenziselwa ukwenza ifayile ye- Starcourt Mall Kwixesha lesi-3 lezinto ezingaqhelekanga, kuthiwa uyathengiswa. Ngoku ka Zintsonkothile Abanini bevenkile, iMoonbeam Capital Partners, bathi lixesha lokuba ipropathi iye kwintengiso emva kweminyaka yokwehla kunye nembali yayo enzima. (Emva ngo-Disemba ka-2017, umzimba womfazi wafunyanwa emall emva kokungaqapheli iiveki ezimbini. Umzimba wafunyanwa kwindawo eshiywe kwindawo yenkundla yokutya yaseGwinnett ngexesha lokujonga ngesiqhelo.)
Kukho amarhe asasazekayo iminyaka yokuba ivenkile izakufakwa kwintengiso, kwaye ngaxa lithile, kwaxelwa ukuba umnini weligi yeqakamba uza kuyithenga le propati ayisebenzise ukwakha ibala lezemidlalo, Iposi yemihla ngemihla yeGwinnett . Emva Izinto ezingaqhelekanga beka ivenkile kwakhona kwindawo ebonakalayo, bekukho nengqikelelo engakumbi malunga nesiphelo sayo. Ixabiso alikabhengezwa okwangoku, kodwa iphephandaba liqinisekisile ukuba i-Colliers International Atlanta izakulungelelanisa intengiso.
Izinto ezingaqhelekanga Akukho mntu ungaziwayo kwiindaba ezijikeleza umboniso, nangona kunjalo. Olu luhlu luqokelela uninzi lwe-buzz unyaka wonke, nokuba nezinto ezithandwayo ukongeza ekhayeni lakho, njengezincedisi zephuli. Njengoko Indlu entle Kuxelwe ngaphambili, unokufumana isigebenga Demogorgon Ukufafaza, ke ungoyiki ukugcina ngoku ihlobo elizayo ngaphambi kokuba bahambe. Isitshizi se-monster esineemitha ezintandathu ubude sitshiza amanzi ngomlomo kwaye singena ngokugqibeleleyo nakweyiphi na ithumbu lokulima elisezantsi. Ukuyisebenzisa, kufuneka ulandele amanyathelo amabini alula: Yifumbele kwaye uyijike ngendlela yokuphumla ukonwabela ukonwaba elangeni kwiintsuku ezishushu, kunye nomboniso wakho owuthandayo engqondweni.
Umboniso uvuselelwe elinye ixesha, kwaye kude kube Izinto ezingaqhelekanga ixesha lesi-4 kuphuma, siyakulindela ngolangazelelo naziphi na ezinye iindaba kunye neemveliso esinokufumana izandla zethu kuzo!
UNashia Baker Umhleli wempelaveki UNashia Baker nguMhleli wempelaveki weNdlu entle neDelish; Ubandakanya ukuhonjiswa kwekhaya, uyilo kunye neendaba ezinxulumene nokutya.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io Intengiso-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi
amazwi eebhodi ezihlekisayo
usetyenziso lweplani yasimahla
izimvo zokuhombisa ikhitshi elityheli
Indawo yehgtv yokuphupha ekhaya